Rahoviana no hataoko vaksiny miady amin'ny haromotana ny alikako? | Tontolo alika
Ny rabies dia aretina viralin'ny aretina izay manohina ny rafi-pitatitra foiben'ny biby, ao anatin'izany ny olombelona. Na dia fongorina any Espana aza io vaksinina io dia voatery any amin'ny vondrom-piarahamonina mahaleo tena rehetra ary tena soso-kevitra eraky ny firenena sy manerantany, satria tsy vitan'ny hoe tsy misy fanafody io fa afaka mamarana ny ain'ny olona voadona ihany koa.
Noho izany, amin'ny maha mpikarakara tompon'andraikitra, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hahazo ny tsimatimanota ilainy. Fa rahoviana marina? Raha manontany tena ianao hoe rahoviana ny hanaovana vaksiny ny alikako amin'ny haromotana, any Mundo Perros no hamalianay ny fanontanianao.
1 Inona no atao hoe raby?
2 Inona avy ireo soritr'aretin'ny alika?
4 Rahoviana no tokony hatao vaksiny miady amin'ny haromotana ny alika?
Inona no atao hoe raby?
Hatezerana dia aretina mifindra ateraky ny virus Rhabdoviridae izay manafika ny rafi-pitatitra foibe, miteraka encephalitis. Ny alika no tena mpampiantrano sy mpampita ny virus, fa raha ny tena izy, ny olona manana rà mafana rehetra dia mora tratran'ny aretina.
Azo alefa amin'ny alika marary mankany amin'ny iray salama amin'ny alàlan'ny manaikitra.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny alika?
Ny soritr'aretina voalohany dia hiseho aorian'ny fe-potoana fampidiran-drano, izay mety haharitra 1 ka hatramin'ny 3 volana. Ireo dia: tazo, fanaintainana, mangidihidy ary fahatsapana mirehitra na manaintaina izay nisehoan'ny ratra.
Miseho amin'ny fomba roa ny hatezerana:
Tezitra: ny soritr'aretina dia ny fientanam-po, ny hyperactivity, ny rano phobia.
Malemy: malemy ny hozatra izay eo akaikin'ny faritra nidiran'ny viriosy. Miely tsikelikely izy io.
Tsy misy fitsaboana mandaitra. Raha miahiahy isika fa mety voan'ny rabôma dia mila mitondra azy haingana any amin'ny mpitsabo biby isika. Rehefa tonga any, dia homena antibiotika sy fanafody hafa hanamorana ny soritr'aretinao. Miankina amin'ny hamafin'ity tranga ity dia mety mila IV ianao.
Na izany aza, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fanaovana vaksiny azy.
Rahoviana no tokony hatao vaksiny miady amin'ny haromotana ny alika?
Ny alika dia tokony hahazo ny vaksiny voalohany amin'ny rabies amin'ny faha-4-6 volana, ary ny booster isan-taona. Ny vidiny dia 30 euro fotsiny, ary ho fanampin'izany, ny volom-borona dia tsy hahatsapa fanaintainana rehefa omena azy (prick kely fotsiny) na dia mety misy aza ny voka-dratsin'ny vaksinin'ny rabies.
Ary ianao, efa nanao vaksiny ny alikanao ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Rahoviana no hataoko vaksiny miady amin'ny haromotana ny alikako?
Torohevitra handehanana amin'ny alika amin'ny orana
Matory amin'ny alika